नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : यत्रो ठूलो तामझाम त २ वटा विद्युतीय बसको शुभारम्भ गर्न पो रहेछ त !!
यत्रो ठूलो तामझाम त २ वटा विद्युतीय बसको शुभारम्भ गर्न पो रहेछ त !!
- अर्जुन पोख्रेल
जावलाखेलबाट पुल्चोकतर्फ जाँदा लबिम मल अघिदेखि पुलिसको ताँती र ट्राफिकको सिट्ठी गुञ्जियो । पाटनतिर कुनै ठूलै कार्यक्रम हुन थालेको रहेछ भन्ने लख काँटे । तर साझाको गेटतिर पुग्दा तर प्रहरीले झनै कानै खानेगरी सिट्ठी बजाइरहेका थिए । मोटरसाइकल पार्किङको लागि साझाको मुख्यालयतर्फ जान थालेको प्रहरीले कठालै
समातौँला जस्तो गरेर रोके ।